musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kushanda semuranda kwemakore makumi maviri? Wadzingwa basa!
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Envoy Mhepo ndiyo hombe yedunhu inotakura ndege yeAmerican Airlines.
Kushandira ndege yakadai kwemakore makumi maviri kunoreva kuzvipira uye kushanda nesimba. Zvinogona dzimwe nguva kunzwa sekuve muranda webasa rako.
Kana uchishandira Envoy, haufanire kunyunyuta. Zvakare haugone kumbotaura nezve Rush Hour, iyo Jackie Chan bhaisikopo.
Zvingaite kuti iwe udzingwe.
Mutsamba kuna Nhume Mhepo manejimendi eAugust 25, 2021, gweta reNew York Lee Seham inotora Envoy Air, yakabatana neAmerican Airlines, kuita basa rekugumisa vashandi vatatu nekuzvinongedzera se "varanda" nekutora mutsara kubva kubhaisikopo raJackie Chan Rush Hour senzira yekutsanangura kuti chirevo chacho hachina kuitirwa kuti chigumbure vamwe.
Vashandi vatatu - Losaolima Fonokalafi, Faye Tuala, naAsefash Asfaha - mumwe nemumwe ane makore anopfuura makumi maviri (20) ekukura. Ivo, zvichiteerana, vatorwa kubva kuTonga, Samoa, neEritrea (Africa), uye vakashanda neMumiriri seInventory Control Specialists.
Nhume yakawana chikonzero chekumisa Amai Fonokalafi nekuti, vachipindura zvakataurwa nemumwe mugadziri wema ndege kuti aishanda zvakanyanyisa, akabvuma kuti iye newaanoshanda naye vaishanda se "varanda."
Vhiki rakatevera, mumwe muchena waaishanda naye akatarisana naAmai Fonokalafi nezvezvaakataura ndokusimbisa kuti "Mutema mupenyu." Amai Asfaha - muAfrica -America akazvarwa muEritrea - akauya kunodzivirira waanoshanda naye nekutsanangura kuti Mai Fonokalafi vaibva kuTonga uye vaive nehupenyu hwakasiyana newaipomerwa neVachena.
Ms Asfaha akafananidza waanoshanda naye nemupurisa mutikitivha weChina asina mhaka mune bhaisikopo rakarova avo vasina kuziva vakaita chirevo chinogumbura mubhawa yakachengetedzwa nevekuAfrica -America, ndokukumbira kuna Mai Tuala kuti vabatsirwe kuyeuka iyo bhaisikopo nenzvimbo. Mai Tuala vakapa zita remuvhi uye chirevo chakakodzera kubatsira Mai Asfaha mukutsanangura kusava nemhosva kwaMai Fonokalafi.
Envoy akagumisa Mai Fonokalafi naAmai Tuala vachipomerwa kuita zvisirizvo "muranda" chirevo uye nekuti ivo "vakatora mitsara yemamuvhi" zvaisemesa. Envoy akagumisa Muzvare Asfaha vachipomerwa kutora mitezo mimwe yemuvhi.
Tsamba yaVaSeham yaNyamavhuvhu 25, yakapa Envoy muenzaniso kubva kuNational Labor Relations Board, yakataura kuti mushandi ane kodzero pasi pemutemo wezvemabasa wezvematongerwo enyika yekutaura zvichemo zvine chekuita nemamiriro ake ekushanda achishandisa mutauro wakadai. Akapokana zvakare:
Rudzi rwese rwakaitwa varanda uye rwakaisa vamwe varanda. Yedu repabhuriki kurwa kwekutanga kwenyika dzese kwaive mukupindura kuvapambi vemuAfrica vaive vaita nhapwa vanopfuura mamirioni vezvikepe zveEuropean neVachena veAmerica. Mururimi rweChirungu, izwi rekuti "kushanda semuranda" kana "muripo wemuranda" chirevo chakajairika chisingareve chimwe chinhu kunze kwekunge munhu ari kushanda nesimba kuti awane muripo.
Seham akaenderera mberi achiti kupedzisa vashandi vehupenyu hwese kwekureva bhaisikopo rakakurumbira iro rakakurisa kudarika $ 245 mamirioni pasirese zvaisakwanisa kururamiswa, kunyanya kana chinangwa chereferenzi chisiri chekugumbura asi kusimudzira kunzwisisa. Zvakare, mumwe chete wemuAfrica -America aivapo panguva iyoyo ndiAmai Asfaha, avo vakagumiswa naMumiriri.
Musi waAugust 30, Envoy yakapindura VaSeham kuti zvainge zviri "kuunganidza data renyaya iyi."